COVID-19 မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
Lego, DC စူပါသူရဲကောင်းများ
LEGO VIP အမှတ်များ
Lego Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? သတ်မှတ်ချိန်သည်နောက်ကျသောဇာတ်လမ်းတွဲပေါ်မူတည်သည်
29 / 09 / 2021 29 / 09 / 2021 Jack Yates 863 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Brad Winderbaum, ဗိုလ်ကြီးဂarter, Covid-19, နှောငျ့နှေး, နှောင့်နှေး, Lego, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel, Marvel, ရာသီ 2, Watcher, တိုနီ Stark, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...? ဖတ်ပြီးသားမိ 2
As Marvelဘာဖြစ်လဲ ... ? ၎င်း၏နောက်ဆုံးဇာတ်သိမ်းပိုင်းသို့ရောက်သည်နှင့် LEGO set တစ်ခုသည်နောက်ကျသောအရစ်ကျပေါ်မူတည်သည်
LEGO သည် ၂၀၂၁ တွင်ကလေး ၁.၂ သန်းကျော်ကိုကူညီခဲ့သည်
28 / 09 / 2021 28 / 09 / 2021 Jack Yates 667 Views စာ0မှတ်ချက် 2021, အာဖဂန်နစ္စတန်, စီအီးအို, မေတ္တာ, ကလေးများ, Covid-19, ပေးကမ်းခြင်း, ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအစီရင်ခံံစာ, ဘဏ္resultsာရေးရလာဒ်များ, ဟေတီ, ကစားခြင်းမှတစ်ဆင့်သင်ယူခြင်း, Lego, lego gr ကို, LEGO Group, Niels B. Christiansen, တုပ်ကွေးရောဂါ, LEGO ဖောင်ဒေးရှင်း, အဆိုပါ LEGO Group ဖတ်ပြီးသားမိ 1
အဆိုပါ LEGO Group ၂၀၂၁ တွင်အလှူငွေများ၊ ဒေသခံလူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အခြားပရဟိတအားထုတ်မှုများမှတဆင့်ကလေးငယ် ၁.၂ သန်းကျော်ကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့သည်။
LEGO ဖောင်ဒေးရှင်းသည် COVID-150 ကိုတုံ့ပြန်ရန်ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ လှူဒါန်းသည်
26 / 09 / 2021 27 / 09 / 2021 Jack Yates 645 Views စာ0မှတ်ချက် မေတ္တာ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, Covid-19, ပေးကမ်းခြင်း, ကျန်းမာခြင်း, ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး, Lego, Lego ဖောင်ဒေးရှင်း, တုပ်ကွေးရောဂါ, LEGO ဖောင်ဒေးရှင်း ဖတ်ပြီးသားမိ 1
LEGO ဖောင်ဒေးရှင်းသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အတူ COVID-150 ဒဏ်ခံရသောကလေးများအားထောက်ပံ့ရန်ဒေါ်လာသန်း ၁၅၀ လှူဒါန်းမည့်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
LEGO ပုံစံကိုကျောင်းများတွင် COVID ပြန့်နှံ့မှုကိုသရုပ်ပြရန်သုံးသည်
16 / 09 / 2021 17 / 09 / 2021 Rachael ဒေးဗီးစ် 744 Views စာ0မှတ်ချက် အတန်းအတွက်လေကောင်းလေသန့်, Covid-19, Lego, LEGO Group, LEGO.com, အဆိုပါ LEGO Group, ဗိုင်းရပ်စ် ဖတ်ပြီးသားမိ 1
စကော့တလန်မိဘများအဖွဲ့ဖြစ်သော Clean Air For Class သည် LEGO ပုံစံကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးစာသင်ခန်းများတွင် COVID-19 မည်သို့ပြန့်ပွားနိုင်ကြောင်းကိုသရုပ်ဖော်သည်။
LEGO The Lord of the Rings သည် ၂၀၂၂ တွင်ပြန်လာမည်လား။
03 / 08 / 2021 03 / 08 / 2021 Chris Wharfe 1288 Views စာ6မှတ်ချက် အမေဇုံ, အမေဇုံချုပ်, အမေဇုံချုပ်ဗီဒီယို, Covid-19, Gandalf, Lego, Lego အဆိုပါ Hobbit, လက်စွပ်၏သခင်ဘုရား Lego, လီဂိုလက်စ်, Peter Jackson, အဆိုပါ Hobbit, အဆိုပါ LEGO Group, လက်စွပ်၏သခင် ဖတ်ပြီးသားမိ 1
Amazon ၏တံဆိပ်အသစ် The Lord of the Rings စီးရီးများသည် ၂၀၂၂ တွင်ဖန်သားပြင်များပေါ်တွင်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည်
LEGO Black Widow အစုံသည်နောက်ဆုံးနှင့်သက်ဆိုင်နေပြီ
04 / 07 / 2021 04 / 07 / 2021 Jack Yates 706 Views စာ0မှတ်ချက် 76162 အနက်ရောင်မုဆိုးမရဲ့ရဟတ်ယာဉ် Chase, Black ကမုဆိုးမ, ရုပ်ရှင်ရုံ, Covid-19, နှောငျ့နှေး, ရုပ်ရှင်, ရုပ်ရှင်, Lego, Lego Marvel, Lego Minions, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, Minions, Minions: Gru ၏ထ, Movie,, ရုပ်ရှင်တွေ, တုပ်ကွေးရောဂါ, တာဝန်သခင်, Yelena Belova ဖတ်ပြီးသားမိ 2
ရုပ်ရှင်နှင့်ကစားစရာစက်ရုံများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနှစ်ဖြစ်သည့် LEGO ကိုသာခေါ်ဆိုနိုင်ပြီးနောက် Marvel Black ကမုဆိုးမ
ပထမ ဦး ဆုံး LEGO CON ၏နောက်ကွယ်၌
29 / 06 / 2021 29 / 06 / 2021 Chris Wharfe 579 Views စာ0မှတ်ချက် 10283 NASA အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Discovery, 21321 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာကာသစခန်း, Covid-19, ဂျော့ခ်ျ Gilliatt, Ideas, Lego, Lego Con, Lego ဒီဇိုင်နာ, လူကြီးများအတွက် Lego, LEGO House, Lego Ideas, Lego နာဆာ, Melvin Odoom, Michelle Khare, နာဆာ, အာကာသလွန်းပျံယာဉ်, အဆိုပါ LEGO Group, တွစ်တာ ဖတ်ပြီးသားမိ 1
LEGO ဒီဇိုင်နာဂျော့ဂ်ျလီယက်တ်သည် LEGO CON ၏ပထမဆုံးမြင်ကွင်းနောက်ကွယ်မှမြင်ကွင်းကိုအပြည့်အဝလေ့လာနိုင်သည်
အုတ်ခဲများကို LEGOLAND Deutschland တွင်ပြန်လည်တွေ့ရသည်
10 / 06 / 2021 10 / 06 / 2021 Jack Yates 486 Views စာ0မှတ်ချက် Covid-19, ကျန်းမာခြင်း, ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး, Lego, Lego ဒဏ္Myာရီ, Lego Ninjago, ဥပဒေ, LEGOLAND ဒက်ရှ်လန်း, LEGOLAND Deutschland အပန်းဖြေစခန်း, LEGOLAND ဒဏ္MYာရီ, ဒဏ္.ာရီ, ဒဏ္Myာရီ - ဒဏ္Myာရီပုံပြင်များကမ္ဘာ, နင်ဂျာဂို, တုပ်ကွေးရောဂါ ဖတ်ပြီးသားမိ 1
ရက်ပေါင်း ၂၂၀ ကြာပိတ်ပင်ထားပြီးနောက်ဒေသတွင်းအခြေအနေများတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ LEGOLAND Deutschland ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
Star Wars အခမ်းအနားသည် ၂၀၂၂ တွင်ပင်စော။ ပြန်လာမည်
12 / 05 / 2021 13 / 05 / 2021 Jack Yates 881 Views စာ0မှတ်ချက် 75227: Dartဇ Vader တွေဆီကနေ, ၇၅၂၉၄ Bespin Duel, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်, Covid-19, Lego, Lego Star Wars, Star Wars, star wars အခမ်းအနား, Star Wars အခမ်းအနား Anaheim, Star Wars အခမ်းအနား Anaheim 2020, Star Wars အခမ်းအနား Anaheim 2022 ဖတ်ပြီးသားမိ 1
Star Wars အခမ်းအနား၏ ၂၀၂၂ ရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာပရိသတ်များသည်ပွဲနှင့်အခြား LEGO သို့ပြန်လာရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်